Wararka - Kuraasta Ergonomic ee Xafiiska ugu Wanaagsan ee Guriga Laga Yimaado (2021)
Kuraasta Ergonomic ee Xafiiska ugu Fiican ee Guriga Lagaga Shaqeeyo (2021)
Hadda, saamaynta cudurka faafa awgeed, shaqada guriga waxay ku sii socotaa inay caadi u tahay dad badan, sidaas darteed waxaan uga fogaan karnaa in la ciriiriyo baska iyo tareenada dhulka hoostiisa mara saacadaha degdega ah, waxaanan ku dari karnaa saacad dheeri ah oo hurdo ah.
Ka shaqaynta guriga ma aha dhammaan faa'iidooyinka. Haddii aad u malaynayso inay kaa dhigayso inaad ku yaraato shirarka iyo wakhti badan oo nasasho ah, waad qaldan tahay. Shirkaddu waxay isticmaali doontaa noocyo kala duwan oo software muuqaal ah shirarka fiidiyowga, isgaarsiinta codka, iyo xitaa kordhinta saacadaha shaqada mararka qaarkood.
Taas bedelkeeda, waxaa laga yaabaa inaan guriga ka shaqeyno waqti dheer.
Marka aad ku fadhiisato kursi balaastiig ah oo ku hor yaal kombayutarka in ka badan 8 saacadood maalintii, waxaa laga yaabaa inaad dareento dhabar xanuun iyo sidoo kale cadaabta jidhkaaga. Si loo yareeyo khatarta jidhkaaga, pls tixgeli kursi raaxo leh, ergonomic ah. Halkan waxaa ah kursi caan ah oo aan dhabarka kaa jabin doonin.
Waa maxay waxa ugu muhiimsan in la doorto kursi xafiis?
Kursiga ugu fiican ee xafiiska wuxuu ku hayn karaa raaxo iyo diiradda muddo dheer, taas oo hagaajinaysa hufnaanta shaqada.
Dhabarku inta badan waa qaybta ugu horreysa ee jidhka oo silica maalinta oo dhan. Sidaa darteed, dooro kursi leh dhabarka dambe ama taageerada lumbar, badiyaa qaab barkin dheeri ah oo ku yaal dhabarka dambe.
Dhabarku inta badan waa qaybta ugu horeysa ee jidhka ee ku dhibtoonaysa fadhiga maalinta oo dhan. Markaa raadi kursi dhabarka ama lumbar taageero ah, kaas oo inta badan ku yimaada qaab barkin dheeri ah oo ku yaal dhabarka dambe.
Wax kale oo xusid mudan waa hagaajinta. Kursiga xafiiska ugu fiican adduunka waa macno la'aan haddii uu aad u sarreeyo ama aad u hooseeyo. Gacan-ku-jiidashada iyo leexinta sidoo kale waa la hagaajin karaa.
Waa kuwan qaar aan ku talinnay:
ARICO- Abaalmarinta Dhibcaha Cas 2021
1: Kursiga xafiiska dhabarka sare,
2: Isbuunyo loogu talagalay kursiga & dhabarka,
3:Aluminium gacan go'an oo la hakiyey,
4: Jarmalka "Bock" habka xakamaynta siligga, 3 booska quful, kursi la simbiriirixan, qaybta dambe iyo kursiga isku xirka waa aluminium,
5: Φ60MM PU caster, Moodelku waa D65Y80 KGS fasalka 4 gaaslift
Qaabka dambe ee V-qaabeeya: Kursiga u gaarka ah ee V-qaabeeya ee gadaasha dambe ee la laalay waxa uu si dheer ugu fidsan yahay dhexda ilaa habka hoose, kaas oo adkeeyey cududaha oo uu tarjumo muuqaalka firfircoon ee bilicda joomatari.
Habka BOCK:Waxaa sameeyay kooxda Bock Germany R&D, nidaamka farsamadu wuxuu ku salaysan yahay fikrad furan oo iftiin leh. Inkasta oo guryaha farsamada caato ah, dhammaan qaybaha lagama maarmaanka ah ee gudaha gudaha ayaa ku qarsoon gudaha. Kala duwanaanshaha isku hagaajinta xiisadda waxaa lagu gaari karaa wareegga ugu yar ee giraangiraha gacan ergonomical. Shaadhka gacantu waxa uu u baahan yahay kaliya in loo rogo 1.5 wareeg si loo dhamaystiro kala duwanaanshaha xiisadda. Habka isku xidhan waxa uu ku salaysan yahay nidaamka isku xidhka dhidibka 4 kaas oo keena in aad ugu raaxaysato jiidashada shaadhka la yareeyey.
Doorashada Midabada leh: Midabyo kala duwan oo isku mid ah ayaa isku xidhan oo lagu daraa hal tol iyo hal dun, iyadoo la durayo tamarta midabada saafiga ah, abuurista qaab gaar ah oo furaya meelo badan oo hal abuur leh.